Garissa Waa Geeri Ogadeen! – Rasaasa News
Garissa Waa Geeri Ogadeen!
Feb 5, 2012 Garrissa Waa Geeri Ogadeen!
Magaalada Garissa oo mar ahaan jirtay magaalooyinka ugu amaanka badan geeska Afrika ayaa maanta ah magaalda labaad ee ugu amaanka daran geeska Afrika, Muqdisho oo kaliya ayaa ka amaan xun.
Waxaa loo baahan yahay in la isweydiiyo sababta keentay in magaalada Garisa ay u noqotay amaandaro iyada oo guud ahaan dalka Kenya yahay amaan, jirina ururo mucaarad ku ah dawlada oo loo aanayn karo amaanka faraha ka sii baxaysa ee magaalada Garrissa, isla markaasna ay magaaladu tahay hoyga hal beel oo Somaliyeed.
Looma aanayn karo amaan darada Garrissa ururka Al shabaab oo dhawaan uun bilaabay olole ka dhan ah Kenya, ka dib kolkii ay ciidamada Kenya galeen gudaha dalka Somaliya.
Laga bilaabo sanadkii 2010, xiligaas oo ahayd xiligii ay heshiiska nabadeed la galeen Ethiopia labada Jabhadood ee UWSLF iyo ONLF, waxaa uu isbadal dhakhso ah oo amaan daro ka bilowday gabalka Waqooyi Bare Kenya gaar ahaana magaalada Garrissa.
Xaqiiq waxaa ah in dalka Kenya uu ahaa saldhiga labaad ee Jabhada ONLF, marka laga reebo Eritrea oo iyadu si xoog leh u cadaysay taageerada ay siiso ururka.
Ciidamada New Boliska Ethiopia oo loo tababaray ilaalinta amaanka gabalka Somalida Ogadeniya, ayaa sanooyinkii 2006/2009 qaaday weeraro xoog leh oo ay kaga saarayaan ONLF dhulka Somalida Ogadeeniya.
Arintaas oo sababtay in Ciidamo xoog leh oo wata dabkoodii ay galeen gudaha dalka Kenya, gaar ahaana gabalka waqooyi Bare Kenya, taas oo sida la rumaysan yahay qayb weyn ka ah amaan darada ka jirta Waqooyi Bare Kenya, gaar ahaan magaalada Garissa.
Jabhadaha heshiiska nabadeed la galay Ethiopia waxaa ka cadhooday qayb ka mid ah ururka ONLF, oo diiday heshiiska nabada runtiina ahayd qaybta hubaysan ee gashay gudha Kenya.
Garabka ONLF, ee uu hogaaminayey Maxamed Cumar Cismaan [Jwxo-shiil], waxaa si aan qarsasho lahayn ugu baaqay in gudaha Kenya lagu dilo xubnaha iyo taageerayaasha ururada Ethiopia la galay heshiiska nabada.
Dhibaatada dilalka faraha badan waxay ka fajicisay Booliska Kenya, in kasta oo ayna dan ka galin intii hore maadaama dadka dhimanaya ayna ahayn muwaadiniin Kenya ah. Waxay ciidamada amaanka Kenya fariin adag u direen xubnaha iyo taageerayaasha ururka ONLF, qaarkoodna waa la qabtay in kasta oo ay kolkii dambe siidaayeen masuuliyiin Somali Kenyan ah.
Taliyaha ciidanka amniga Waqooyi Bare Kenya ayaa hore u sheegay in ururo Somali ah oo mucaarad ku ah Ethiopia, kuwaas oo laga soo caydhiyey dalka ayaa ku dagaalamayaan gudaha Kenya.
Laga bilaabo sanadkii 2010, waxaa dalka Kenya siyaabo kala duwan loogu dilay muwaadiniin Somali Ethiopian ah oo ay tiradoodu gaadhayso 65 oo isugu jira heer walba oo bulshada. Dilalka ka dhacay Kenya ma jiraan wali hal xabo oo cid loo qabtay ama maxkamad loo taagay.
Labada dal Kenya iyo Ethiopia waxaa ku nool dad Somali ah, waxaana jira masuuliyiin Somali ah labada dhinacba dadkan ay xabadu ku socoto. Waxaa kale oo jira cuqaal ka dhalatay dadkan aan dagaalka ku jirin ee xabada ugu dhimanaya maalin walba gudaha dal nabad ah.
Shaki kuma jiro in ay jirto cid masuul ka ah arintan, mana ah midaasi wax qarsoon. Habeenkii xalay ahaa waxaa magaalada Garisa lagu dilay afar ruux oo hal qoys ah dadka dilka gaystayna wax cabsi ah kama qabin in la qabto iyo booliska midna, dilka ka dibna si caadiya ayey uga lugeeyeen goobta dilku ka dhacay.
Waxaa isweydiin leh in dad ka tirsan ciidamada Kenya ay og yihiin dilalkan doonayna in ay wax ka qabtaan?
Arinkaas oo daliil looga dhigi karo sida baahsan ee ururada Somalida ee mucaaradka ku ah Ethiopia ay uga hawlgalaan dalka Kenya, dhinaca kalena aad arkayso mucaarad Oromo ah oo Ethiopia dib loogu celinayo.
Xaqiiq waxaa ah in aan arki doono dad kale oo isla beesha ah oo Kenya gudaheed lagu dilo wakhti aan la sheegi karin. Waxaa wanaagsanaan lahayd in arinkan wax ka qabashadiisa ay gasho cuqaasha beesha ay khusayso si ay uga hortagto dhimashoku soo noq noqota beesha.
Sii socoshada arimahan ayaa horseedi karo colaad sokeeye oo ka dhacda gudha Kenya ama gudha Ethiopia arinkaas oo dhiibato u ah beesha ay xabadu ku socoto, laakiin ayna waxba ka soo gaadhayn labada dal.
Maxaa Loo Xidhay Hogaanka Dhaqanka?